pamusoro 8 yakavhurwa sosi bhaa yekutevera maturu
Kuru Qa Wepamusoro 8 Vhura Source Bug Yekutevera Maturu
Wepamusoro 8 Vhura Source Bug Yekutevera Maturu
Vhura sosi Bug Yekutevera Maturu
Iyo bug yekutevera system kana hurema yekutevera system ndeye software application iyo inoteedzera inotaurwa software bugs mune software yekuvandudza mapurojekiti. Inogona kutorwa senge mhando yechinyorwa chekutevera system. Pazasi pane runyorwa rweVhura sosi Bug Yekutevera MaSystem.
Bugzilla iMozilla Foundation inotsigirwa / yakagadzirwa bug yekutevera system iyo inobvumidza vashandisi vayo kuti vatore uye vateedzere zvikanganiso muchigadzirwa chavo zvinobudirira. Icho chiitiko chakakura kwazvo uye chine hupfumi chishandiso chine maficha senge epamberi ekutsvaga kugona, mabhurogi runyorwa mune akawanda mafomati, akarongwa mashumo, otomatiki kuteedzera bug kuona, kugona kufaira / kugadzirisa bugs neemail, nguva yekutevera, yekukumbira system, yakavanzika yekubatanidza uye makomendi, chigamba muoni etc.
Icho chigadzirwa chakashandurwa zvakanyanya chinoshandiswa neakakura akavhurwa sosi mapurojekiti senge Linux Kernel dev timu, Apache dev timu, GNOME dev timu uye makambani anozivikanwa senge Open Office, NASA, Facebook nezvimwe uye ndeimwe yeanokurudzirwa bug bug masisitimu.
Mantis BT iyi webhu-based bug yekutsvagisa system iyo isingangoteedzere mabugs, asi inosanganisira mushandisi system kuitira kuti vashandisi vazhinji vagone kudyidzana uye akawanda mapurojekiti anogona kuteverwa. Iko kunyorera kune maficha senge akabatanidzwa wiki, chat, RSS feeds, nguva yekutevera, sosi kodhi yekubatanidza, yakavakirwa mukuzivisa, maemail notices, zvakabatanidzwa, akawanda-DBMS rutsigiro, rutsigiro rwemidziyo nhare etc.
Zvakareruka kuisa uye kutonga uye zvakachipa zvisingaperi pane imwe software yekutengesa, Mantis isarudzo iri pachena kune chero diki kune yepakati saizi kambani.
Trac ndeye yakawedzeredzwa wiki uye inoburitsa nzira yekutevera yemapurogiramu ekuvandudza software. Iyo inopa yakapusa uye nyore kushandisa webhu interface.
Zvimiro zvinosanganisira chinongedzo kune Subversion (uye imwe vhezheni yekudzora masystem), inoreruka nzvimbo dzekuzivisa, maficha manejimendi maficha anosanganisira nzira yemigwagwa uye nhanho yekutevera, manejimendi manejimendi, wiki uye rutsigiro rweruzhinji rwema plugins. Iyo yakagadzikana uye yakapusa uremu system; zvisinei iwe unogona kurasikirwa nezvimwe zvemberi maficha anopihwa nemamwe mabhuregi ekutevera masystem.
Dzorera ndeye yemahara uye yakavhurwa sosi, webhu-based projimendi manejimendi uye bug yekutevera chishandiso. Inopa zvakabatanidzwa manejimendi manejimendi maficha, inotsigira akawanda mapurojekiti, kuburitsa nyaya, rutsigiro rweakawanda vhezheni yekudzora sarudzo, inoshanduka basa based based access kudzora, kalendari & Gantt machati ekubatsira anoonekwa anomiririrwa emapurojekiti uye yavo yakatarwa nguva, feeds & email ziviso, nguva yekutevera, chirongwa wiki, maforamu eprojekti nezvimwe. Ratidza chigadzirwa chakapfuma chakakurudzirwa uko kugadzikana chisiri chinhu chakakosha.
Kumbira Tracker bhizinesi-giredhi tikiti / tafura yedhesiki software inogonesa boka revanhu kugona nehunyanzvi kubata mabasa, nyaya, uye zvikumbiro zvakatumirwa nenharaunda yevashandisi.
Inoshandiswa zvakanyanya senzira yekubatsira dhizaini. RT inoita mabasa akakosha senge kuzivikanwa, kukoshesa, kupihwa basa, kugadzirisa uye kuzivisa kunodiwa nemabhizimusi-akakosha manyorerwo anosanganisira manejimendi manejimendi, tafura yekubatsira, tikiti yeNOC, CRM uye kusimudzira kwesoftware, inopa mobile-optimized interface ye iPhone, Android uye Web OS zvishandiso, maDashboard uye magirafu ehukama, akapfuma mavara ekugadzirisa, nyore kushambadzira uye tsika tsika.
RT inopa kwakawanda kuchinjika kune vashandisi vayo kureva nekuimisa iyo, inogona kushanda nenzira yaunoda kuti ishande.
Dhawunirodha Kumbira Tracker
Zvisaririra iri yakagovaniswa bug yekutevera, vhezheni yekudzora, wiki uye blog mashini ese ari mune imwechete yakasanganiswa package. Iyo ine yakavakirwa-mukati uye nyore-kushandisa-webhu interface, inotsigira auto sync maitiro, ndeye cgi inogoneswa, inopa yakapusa network, ndeye yakasimba uye yakavimbika software uye iri nyore kushandisa & kuendesa neimwe imwechete bhanari iyo inoshanda papuratifomu yega yega unogona kufungidzira.
Php Bug Tracker ndeye web-based bug tracker ine mashandiro akafanana nemamwe masystem ekutsvagisa nyaya, akadai seBugzilla. Dhizaini inotarisa pakupatsanura iyo mharidzo, kunyorera, uye dhatabhesi matemba.
Php Bug Tracker haina huremu uye yakapusa kuisa, kushanda uye kubata. Mazhinji mavara anogona kugadzirirwa yako kunyorera.
Dhawunirodha Php Bug Tracker
iphone 11 pro inokurumidza charger
iphone 5s vs chinyorwa 3
Heano mamwe matipi ekuvandudza yako bhatiri hupenyu uchitamba Pokémon Go (Android / iOS gwara)
Waiziva here - kugonesa Bluetooth mune isiri-yekutsvaga modhi haina & apos; kudzivirira kudzivirira kune yako smartphone
Iko kupenya: maitiro ekudzima iyo Galaxy S6 kuchaja LED, asi chengeta iyo ziviso mwenje